यदि तपाईं प्रयास कहिल्यै डेटिङ संघाई मानिसहरू इन्टरनेट मा, तपाईं गर्नुपर्छ एक प्रयास बनाउन छ । कसले थाह, सही मानिस हुन सक्छ तपाईं को लागि प्रतीक्षा सही अब निःशुल्क प्रेम. संघाई सामेल सबै भन्दा राम्रो मुक्त डेटिङ साइट र बैठक सुरु संघाई एकल पुरुष सही अब । हाम्रो प्रस्ताव उपयोगी डेटिङ उपकरण जस्तै च्याट कोठा छ र नि: शुल्क सन्देश आदान प्रदान गर्न प्राप्त गर्न थाहा संघाई मानिसहरू राम्रो छ । बनाउन आफ्नो प्रोफाइल अदृश्य आगंतुकों लागि र अन्य प्रयोगकर्ताहरू, सेवा, लगइन गर्न साइट प्रयोग गरेर आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड. जान ‘व्यवस्थापन प्रोफाइल’ मा बक्स सही र प्रेस ‘निलम्बन प्रोफाइल’.
यो अस्थायी रूपमा लुकाइएको हाम्रो डेटाबेस मा र तपाईं असमर्थ छन् प्राप्त गर्न, सन्देश पठाउन. तपाईं सक्रिय आफ्नो प्रोफाइल बनाउन यो उपलब्ध फेरि को लागि खोज र सम्पर्क थिचेर ‘सक्रिय प्रोफाइल’. मेरो बारे, म छु वर्ष पुरानो छ, र म हुँ, हाल संघाई, चीन । संयुक्त राज्य अमेरिका को । म हुर्क्यो मा पश्चिमी आधा. मा समय को लागि मा जा को एक गरेको कार्यालय मा संघाई, यो एक ठूलो कम्पनी र म भेट गरेका छन्, केही अचम्मको गर्न सक्छन् आशा चीन आउन र बस्न मलाई संग, म तपाईं दिनेछु एक आनन्दित जीवन म मेहनत र कुक, राम्रो जीवित संघाई अब । म छु यहाँ हेर्न को लागि एक साथी छ जो राम्रो मान्छे र जस्तै बच्चाहरु, सँगै अन्त सम्म को जीवन बाँचिरहेका संघाई, म जस्तै खेल्न जान, विश्वविद्यालय स्नातक, कहिल्यै बस्थे बेल्जियम र हल्याण्ड, लेखापाल, प्रशिक्षण, तलाकशुदा दस वर्ष पहिले, एक छोरा, उहाँले विवाह गत वर्ष आकर्षक, जवान हेरचाह गर्न रुचि, पढ्न र अध्ययन विभिन्न पुस्तकहरू जस्तै, खेल प्रेम बनाउन कुराहरु र मित्र संग बाहिर जा चलचित्रहरू हेरिरहेका छु, सकारात्मक मायालु छ । र म एक हास्य को राम्रो अर्थमा छ । म जस्तै पढाइ, यात्रा, कुकिङ संगीत र जान मन संग्रहालय । लागि जाने एसएनबी मा पार्क छ ।. राम्रो थाह छ भनेर हामी थाह प्राप्त गर्न सक्छन् प्रत्येक देखि एक सम्म दूरी यति बजे पाउन भने तपाईं मलाई रोचक र सुरु गर्न चाहनुहुन्छ केहि अर्थपूर्ण र रोचक ।.
जब म संग महिलाहरु छ । एल जीवन मा पुडोंग, संघाई
म जस्तै स्राव संग डेटिंग कसैले शेयर गर्ने नै उत्सुकता र मन ।. म छु एक दयालु, मायालु, रोगी र जिम्मेवार व्यक्ति छ । चाहनुहुन्छ पूरा गर्न कसैले लागि यहाँ विवाह । म गम्भीर छु । कुनै ठट्टा, न त वरिपरि खेल न त बर्बाद समय छ । तपाईं छ
← सबै भन्दा राम्रो चिनियाँ डेटिङ साइटहरु पाउन चिनियाँ महिला - अन्तर्राष्ट्रिय डेटिङ सल्लाह लागि खोजी पुरुष विदेशी ब्राइड्स
एक चिनियाँ महिला डेटिङ साइट मेल आदेश ब्राइड्स लागि विवाह →